मर्जरमा नगई नहुने अवस्था नेपाली बैंकहरुको होइन्ः तुलसीराम गौतम |
मर्जरमा नगई नहुने अवस्था नेपाली बैंकहरुको होइन्ः तुलसीराम गौतम
कर्पोरेट नेपाल , ७ श्रावण २०७६, मंगलवार ७ श्रावण २०७६, मंगलवार
वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न भन्दै करिव एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई बोलाएर मिल्ने संस्थाहरुसँग मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता ल्याउन आग्रह गर्दै समय दिए । तर पछिल्ला दिनहरुमा यो मर्जरको कुरा एकाएक सेलाउँदै गएको अवस्था छ । अधिकांश बाणिज्य बैंकहरु मर्जरका लागि मनोवैज्ञानिकरुपमा तयार रहेको देखिन्न । यद्यपि उनीहरु मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ, त्यसका आधारमा उपयुक्त निर्णयमा लिने पखाईमा छन् । यसै सन्दर्भमा सेन्चुरी बैंकका सिइओ तुलसी गौतमसँग गरिएको छोटो कुराकानी यस्तो छः
राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो भनेर मर्जरमा जानु भनेको अवस्था छ । सेन्चुरी बैंकको तयारी के छ मर्जरको सम्वन्धमा ?
पहिलो कुरा हामी मौद्रिक नीतिको पखाईमा छौं । यो विषयमा हाम्रो पनि ८–१० दिनअघि कुरा भएको थियो । मुल कुरा भनेको मौद्रिक नीति कसरी आउँछ ? इन्सेन्टिभ (सुविधा) आउँछ कि आउँदैन ? त्यो हेरेर मात्रै भन्न सकिने कुरा हो । मर्जरकै लागि भनेर हाम्रोमा समिति बनिसकेको छ । झट्टै अघि किन नबढेको भने मौद्रिक नीति कसरी आउँछ ? भनेर हो ।
मौद्रिक नीतिमा तपाईंहरुको अपेक्षा के हो ?
कुरा दुई किसिमको छ । केही दिनअघि ‘मर्जर आफै गर, नगरे म्याण्डेटरी हिसावले पनि मर्जर गर्नुपर्ने हुनसक्छ’ भन्ने कुरा आइरहेको थियो । हुनसक्छ मात्रै, भइसकेको छैन । त्यस्तो म्याण्डेटरी (अनिवार्य) कुरा आयो भने कसरी जाने ? अर्को भनेको ‘गछौं भने गर, नगर्ने भए पनि नगर, तिम्रो खुशी’ भन्यो भने कसरी जाने ? जानेपर्ने अवस्था आएको अवस्थामा के कस्ता छुट सुविधा दिइन्छ ? त्यसले आकर्षण थप्न सक्छ । त्यो भनेको मोटामोटी रेसियोको कुरा हो । सीसीडी छ, अहिले थपिएको कल डिपोजिटको पनि कुरा छ, कर पनि छ, यद्यपि कर भनेको सरकार पट्टिको कुरा भयो, त्यस्ता कुराहरुलाई राष्ट्र बैंकले कसरी सम्बोधन गर्छ ? छुट सुविधा दिन्छ कि दिँदैन् ? पूरानो पनि लामो लिष्ट छ, के के पाउने के के नपाउने ? भन्ने, जुन कुरा मर्जर वाई–लमा आइसकेको कुरा हो । त्योबाहेक पनि थप छुट सुविधाका कुराहरु आउँछ कि आउँदैन् ? भन्ने कुराको प्रतिक्षामा छौं ।
भनेपछि छुट सुविधाले मर्जरमा जाने नजाने कुरा निर्धारण हुने भयो ?
निर्धारण नै त नभनौं । अल्ली आकर्षण बढ्ने मात्रै हो । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मर्जरलाई विवाहसँग तुलना गरिएको छ, विवाह भनेको त दुई पक्षको कुरा मिल्छ कि मिल्दैन ? लामो समयसम्म सँगै हिँड्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने कुरा अहम हो । मुल मुद्दालाई छोडेर हतारमा बलजफती विवाह गर्दा गर्दुवामा के आउला ? के पाइयला ? भन्ने कुरा हुनसक्छ । मेरो लागि त भन्नुहुन्छ भने यो गौण कुरा हो ।
हुन त मर्जरको कुरा सेलाउँदै गएको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि भोलि मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरका लागि फोर्स गरियो भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?
अहिले त हामीले दबाब महशुस गरेको छैन् । राष्ट्र बैंककै पदाधिकारीहरुको अभिव्यक्तिहरु हेर्दा सुन्दा चाहीं म्याण्डेटरीकै रुपमा मर्जरको कुरा आउला जस्तो मलाई लाग्दैन् । अर्को कुरा स्वयच्छाले गर्ने मर्जर त अहिले पनि खुल्ला नै छ । जस्ले जहिले जर्दा पनि भइहाल्छ । त्यसका लागि बोलिरहनुपर्ने कुरा छैन् । मर्जर बन्द गर्ने प्रश्नै उठेन् । जबरजस्ती मर्जर गराउने कुरा पनि होला भन्ने मैले बुझेको छैन् । नेपालका बैंकहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजानुपर्ने आवश्यकता आइपरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन् । मलेसियाको उदाहरण दिइन्छ । मलेसियाको केश फरक हो । त्यहाँका बैंकहरु जस्तो क्राइसिसमा नेपालका बैंकहरु मलेसियाको उदाहरण दिइन्छ । मलेसियाको केश फरक हो । त्यहाँका बैंकहरु जस्तो क्राइसिसमा नेपालका बैंकहरु छैनन् । राम्रो मुनाफा दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेका कुराहरु पूरा भएका छन् । मर्जर गर्ने कुरामा धेरै कुराहरु मिल्नु पनि पर्छ ।
गर्भनरले भनेजस्तो फिनटेक (वित्तीय प्रविधि)को खर्च बढिरहेको छ, बैंकहरु लगानीयोग्य पुँजीको कमीले समस्या भोग्दै आएको अवस्था छ, संख्या धेरै भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कुरा आइरहेको छ । यस्ता कम गर्न त मर्जरमै जानु ठिक हुन्छ नि । होइन् र ?
यसमा मेरो के सोचाई छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या के के छन् ? १, २, ३, ४ भनेर आउनुपर्यो । त्यो समस्याको कारण के हो ? त्यो पनि आउनुपर्यो । र, त्यसको निराकरण मर्जर नै हो त ? हो भने कसरी हो ? तर्कसंगतरुपमा आउनुपर्यो । पहिलो कुरो बैंकहरुमा डिपोजिटको क्राइसिस छ । यद्यपि अहिले अलिअिल सुधार भएको छ । तर पूरै समाधान भएको छैन् । साउनमा पैसा बढि हुने कुरा पहिला पनि देखिएको हो । जुन डिपोजिटको क्रन्च छ, त्यसलाई मर्जरले समाधान गर्दैन् । २८ वटा बैंक घटेर १५ वा १० हुँदैमा तरलता समस्या समाधान भएर जाँदैन् ।
अर्को कुरा अनहेल्दी कम्पिटिशन भयो भन्ने छ । अनहेल्दी भनेको के हो ? गैरकानुनी काम गरेको भए सजाय दिने कुरा होला । त्यो राष्ट्र बैंकले गरिहाल्छ । र रह्यो फिनटेकको कुरा । मिडियामा आएजस्तो फिनटेकमा अर्बौं रुपियाँ खर्च हुँदैन् । जति हुनु भइसकेको छ । नियमितरुपमा हुने अलिअलि हो, त्यसले बैंककै नाफामा असर गर्ने भन्ने हुँदैन् । बरु मर्जरमा जाँदा फिनटेकमा भएको लगानी चाहीं खेर जान्छ । सफ्टवयरमा भइसकेको खर्च सम्वन्धित बिक्रेताले फिर्ता गर्दैन् । तर कालान्तरमा हेर्ने हो भने जस्तो चार वटा बैंकले चार वटा सफ्टवयर किनेर चलाइरहेको छ, उनीहरु मर्ज भयो भने एउटैले काम चल्यो । एउटै सफटवयरले पुग्यो, एउटै एजेन्सीलाई पैसा दिए पुग्यो । त्यो हिसावले त ठिकै पनि हो । तर आजै सफ्टवयरले गर्दा बैंकहरु मर्जरमा गइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन् ।
बैंकहरुमा लगानीकर्ताहरुको लगानी बढिको अवस्था छ । पुँजी बढेकाले पहिला जस्तो बैंकहरुले प्रतिफल दिन सकेको अवस्था छैन् । लगानीकर्ताले नाफा खोजिहाल्छ । त्यसका लागि बैंकहरु बलियो भएर जाँदा राम्रो होला ?
मर्जरले त्यसलाई कसरी सहयोग गर्छ र ? यो कुरा भनेको बैंकको नम्बरसँग सम्वन्धित कुरा होइ्न । पुँजी कति पुग्यो भन्दा पनि हाम्रो ग्याप हेर्नुपर्यो । त्यो भनेको सीएआर (क्यापिटल एडुकेसी रेसियो) । मानौ १० अर्ब क्यापिटल छ भने मोटामोटी एक खर्ब लोन दिन पाइन्छ । हाम्रो क्यापिटल बढिसक्यो दुई अबबाट आठ अर्ब । बढेको क्यापिटलमा सीएआर ग्याप छ । कतिपय बैंकहरुले पैसा थपेको छ नि । त्यो ग्यास रहँदासम्म बैंकहरुको ल्याण्डिङ क्यापासिटी (कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता) त्यतिकै रहिरहन्छ । सबै बैंकलाई एक बनाए पनि १२ बनाए पनि क्यापिटल इज देयर । ग्याप पनि छ । कुनै बैंकको ठूलो ग्याप होला, कुनैको सानो । समग्रमा जति ग्याप हुने हो, जोड्दा त्यो ग्याप रहिरहन्छन् । अहिले २८ वटा बैंकले जति कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्, एउटा बनाउँदा पनि सक्ने त्यति नै हो । मेरो भन्नुको मतलब मर्ज भएर संख्या घट्दैमा नाफा बढ्ने भन्ने होइन् । ठूलो भएर राम्रो हुँदै जाने कुरा त राम्रो हो ।
सेन्चुरी बैंकले साना कुनै बैंक वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
छैन् । किनभने केही समय अघिमात्रै हामीले पाँच वटा संस्था एक्वायर (प्राप्ति) गरेको हो । उनीहरुलाई कन्सोलिडेट गर्न हामी लागिरहेका छौं ।
सेन्चुरी कान्छो बैंक । के कस्तो छ तपाईंहरुको वित्तीय अवस्था ?
असारको रिपोर्ट आइसकेको छैन् । तर हाम्रो फाइनान्सियल स्थिति साउण्ड छ । हाम्रो हेर्दा फाइनान्सियल मात्रै नहरेर राष्ट्र बैंकले धेरै रेसियोहरु तोकेको छ, सीसीडी, सीआरआर, लिक्विडिटी आदि कुराहरु हामीले म्याच गरेको अवस्था छ ।
के पाक्दैछ मौद्रिक नीतिमा, के गर्दैछ राष्ट्र बैंक ?
‘जो कमजोर बैंक छ, कि राम्रोसँग चलाउनु पर्यो, होइन् भने मर्जरमा जानुपर्यो’
मौद्रिक नीतिमाथि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा आजबाट छलफल हुने
अर्थसचिव विदेश हिँड्दा मौद्रिक नीति नै प्रभावित्
कालापानी, लिपुलेकमा १४ हजार वर्गकिलोमिटरभन्दा बढि क्षेत्रफल अतिक्रमण
पुग्ने सडक गतिलो नहुँदा पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट सुनसान बन्दै
लिपुलेक र कालापानी अतिक्रमणबारे जवाफ दिन राज्यव्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलायो
चक्रवतीका विद्यार्थीहरु सरकारसँग न्याय माग्दै माइतीघर मण्डलामा (फोटो फिचर)